Yaa haatan ku horreeya Kooxaha Manchester City iyo Manchester United tartanka loogu jiro saxiixa Kalidou Koulibaly? – Gool FM
(Manchester) 28 Mar 2020. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ka sare martay Manchester City tartanka loogu jiro saxiixa daafaca dhexe ee Naadiga Napoli, Kalidou Koulibaly inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagaan.
Xiddiga xulka qaranka Senegal ayaa la sheegay inuu u cadeeyay kooxdiisa reer Talyaani inuu diyaar u yahay inuu ka tago kooxda ka hor xilli ciyaareedka 2020-21.
Labada kooxood ee Man United iyo Man City ayaa lagu qiimeeyay inay xiiso u qabaan daafaca, laakiin sida laga soo xigtay La Repubblica, kooxda uu hoggaamiyo macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka hor martay kooxda ay xafiiltamaan ee Sky Blue.
Warbixinta ayaa sheegaysa in kooxda 20-ka goor haysata horyaalka Ingiriiska inay diyaar u tahay inay bixiso 80 milyan oo euro oo u dhiganta 71.5 milyan oo gini, taasoo ay ku doonayso 29-sano jirkaan, laacibkaasoo sidoo kale loo maleynayo inuu xiisaynayso Naadiga Everton.
Koulibaly wuxuu qabay dhibaatooyinkiisa dhaawac xilli ciyaareedkan, laakiin wuxuu wali u saftay kooxda 21-kulan tartammada oo dhan, oo ay ku jiraan labo jeer oo uu ka horyimid Liverpool wareegga group-yada tartanka Champions League.
Qandaraaska uu haatan xiddiga xulka qaranka Senegal ee Koulibaly uu kula jiro kooxda uu hoggaamiyo macallin Gennaro Gattuso waxa uu soconayaa illaa dhammaadka kal ciyaareedka 2022-23.
“Kubadda cagta waxay noqon doontaa sida habka kala iibsiga ee ciyaarta NBA-da kaddib Coronavirus” - Fabio Paratici